भागिरथी को ह`त्यारा अरु कोहि नभई छिमेकी भाइ दिनेस रहेछ्न केही छिनमै सर्बजनिक गर्दै नेपाल प्रहरी हेर्नुहोस भिडियो के हुँदै छ। – Dainik Samchar
February 17, 2021 505
बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ की १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको घटना घटाएको अभियोगमा उनी अध्ययन गर्ने विद्यालयका एक विद्यार्थी पक्राउ परेका छन्। सनातन माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ११ मा अध्ययरत दिनेश भट्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला***
प्रहरीले आज उनलाई सार्वनजिनक गर्ने बताएको छ। भागरथी यही विद्यालयको कक्षा १२ मा पढ्थिन्। माघ २१ गते बुधबार विद्यालयबाट घर हिँडेकी उनको भोलिपल्ट शव भेटिएको थियो। ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***
जिल्ला प्रहरी प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले यसबारे पत्रकार सम्मेलन गरेर पुष्टि गर्ने बताए । ‘हामीले सफलता हात पारेका छौं । प्रहरीका केही टोली जिल्ला फर्के । म खोचलेकबाट फर्कने तयारीमा छु । केही समयपछि आजै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘आधिकारिक पुष्टि गरेपछि सबै कुरा खुल्छ ’
प्रहरीले उनीमाथि शंका गरेर पक्राउ नगरी केही दिनदेखि निगरानीमा गरिरहेको थियो। पक्राउ परेका भट्ट भागरथीको न्यायका लागि गरिएको विरोध प्रदर्शनमा समेत सहभागी हुँदै आएका थिए।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनले सुरुमा भागरथीलाई भीरबाट ल’डा’ए’को र घाइते अवस्थामा कर णी गरेको बयान दिएका छन्। उनको कर णी पछि ज्या न लि’ए’को प्रहरी सामु बताएका छन् । प्रहरी निष्कर्षपछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनकै भाई पर्ने दिनेश भट्ट घटनामा संलग्न भएको खुलेको हो । उनले घटनाको दिन डेढघण्टा पहिल्यै भागरथीलाई बाटोमा कुरेर बसेको पनि बताएका छन् ।
भागरथी स्कूलवाट निस्कनु डेढ घण्टा अघि नै उनी स्कूलवाट निस्कीएका थिए । भागरथी पढ्ने स्कूलमै पढ्ने उनी कतिबेला भागरथी घर जाने आउने गर्छिन भन्ने सबैकुरा थाहा थियो । भागरथी कक्षा १२ मा पढ्थिन् भने दिनेश कक्षा ११ मा । दिनेशको विद्यालय छुट्टी समय ३ बजेर १५ मिनेटमा हुन्थ्यो भने भागरथीको २ बजेर ३० मिनेटमा ।
तर माघ २१ गते दिनेश विद्यालयवाट छिटै निस्केका थिए । उनी घटना गराउने योजनाकै कारण छिटो विद्यालयवाट निस्कीएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । तर ह ‘त्या स्वीकार गरेका दिनेशले आफूले ब ला/त्का र नगरेको बयान दिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । भट्टले घटनामा संलग्नता स्वीकार्दै साबिती बयान दिएको भन्दै बैतडी प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘पुरानो परिवारिक रि’सिबीले बदला लिन यस्तो गरेँ भनेका छन्।’ साथै उनले भागरथीलाई लामो समयदेखि एकतर्फी रुपमा मन पराएको बताएका छन् ।
सनातन धर्म माविबाट पाँच मिनेट हिँडेपछि, खोचलेक बजार आउँछ। खोचलेक बजारको केही तल दोगडाकेदार गाउँपालिकाको केन्द्र पनि छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था भएकाले बजारमा चहलपहल हुने गर्छ। त्यसपछि भीरकट्या भन्ने डाँडो भएर सिल्ल गाउँ हुँदै लवलेक वनमा पुगिन्छ। खोचलेक बजारबाट लवलेक वनको दूरी झन्डै एक किलोमिटर छ। करिब दुई किलोमिटरको वन क्षेत्र सकिनेबित्तिकै पासिमबाटा भन्ने गाउँ सुरु हुन्छ। ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***
Prevभा’गर’थी भ’ट्टको ह’त्यामा सं’लग्न दिनेश भट्ट’लाई यसरी गरि’यो सा’र्वजनिक , रु’दै स्वी’कारे ह’त्या..
Nextबोल्नेको पिठो बिक्दो रहेछ , नबोल्नेको चामल पनि नबिक्दो रहेछ (भिडियो)
इन्डियन आइडल १२’ का विजेता पवनदीपले मुम्बईमा किने यति महङ्गो घर
आज आइतबार फेरि ह्वात्तै बड्यो सुनको मुल्य! कतिमा हुदैछ त कारोबार
नायक पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारीले गरे विवाहको लिखित सम्झौता ! (2381)
खुलाए बिनय र पुजाले आफ्नो अ’न्तरजातीय बिहे गर्नुको का’रण,सम्पतिको लागि बिहे गरिस भन्नेलाइ क’डा ज’बाफ (1784)
कोहलपुर दु’र्घट’ना अपडेट : ५ को मृ’त्यु (1571)
बलात्कृत अपांगलाई न्याय मुस्किल (1507)
आषिश जो कहिलै सकेन्ड भएनन् …जो बाजेको मृ’त्युको १५ दिनमै भगवानको प्यारो भए (1459)
माघे संक्रान्तिको देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरु लाई शुभकामना ?❤️ (1451)
यिनै हुन् जसलाई मिल्यो गुगोल बाट ६० लाखको प्याकेज, आखिर के काम गर्छिन यी युवती ? (1434)